Daawo Sawirro+Warbixin “Waxaan u dhaawacmay Dalkeyga waxaana u dhimanayaa Dalkeyga” – Radio Muqdisho
Daawo Sawirro+Warbixin “Waxaan u dhaawacmay Dalkeyga waxaana u dhimanayaa Dalkeyga”
Abshir Muumin Cali Gudoomiyaha Dhalinyarada ee Degmada Wadajir oo dhaawac ka soo gaaray Qaraxii ka dhacay Degmadaasi 20-ka Bishii June ayaa loo sameeyey Xaflad soo dhaweyn ah kadib markii lagu soo daweeyey Dalka Dibadiisa.
Inkastoo uu hadda Caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay Abshir Muumin Cali oo dhaawac halis ah kasoo gaaray Qaraxii ka dhacay Degmada Wadajir ee Magaaladda Muqdisho 20-ka Bishii June ee Sanadkan dhanka kalena ku beegneed Maalin Bisha Ramadaan 25, hadana wali waxaa uu xasuustaa Saaxibo badan oo Maalintaas uu ku waayey Musiibada dhacday.
“Runtii aad ayaan u murugoodaa markii aan soo xasuusto Maalintaas waxaa garbaheyga ka baxay saxiibo badan oo muhiim inoo ahaa kuwaas oo ka shaqeynayey Arrimaha Hormarinta Bulshadda Soomaaliyeed, waxaa kale oo aan u joognay in aan dad danyar ah siino lacago aan iska soo Aruurinay”
Waxaa loo-qaaday Abshir Muumin Dalka Turkiga oo lagu soo Daweeyay kadib markii dhaqaatiirtu sheegeen in aad Dalka gudahiisa waxba looga qaban Karin Isha Bidix oo dhaawac ah halis ah kasoo gaaray xiligaas.
“Waxaa dhaawac halis ah iga soo gaaray mid kamida Indhaheyga waxaana dhaqaatiirka igu wargaliyeen in aan dalka gudahiisa waxba looga qaban karin, balse waxa dadaal badan sameeyey Maamulka Gobolka Banaadir kuwaas oo ku guuleystay in dalka dibadiisa ley-qaado”.
Abshir Muumin Cali Waa Guddoomiyaha dhallinyarada ee Degmada Wadjir , marki uu soo laabtay waxaa soo dhaweeyey Maamulka Gobolka Banaadir, kan Degmada Wadajir iyo dhalinyaro kuwaas oo aad u dhiiro galinayey.
Gudoomiyaha Degmada Wadajir Cumar Cabdule waxaa uu sheegay in dhallinyaradu door muhiim ah ka qaadan karto wax ka qabashada Amaanka Dalka hadii ay garbaha isqabsadaan.
“Waxaan qabaa in dhalinyaradu wax badan ka qaban karaan guud ahaan Amaanka Dalka maxaa yeelay, tiradda Dhalinyarada aad ayey u badan tahay, Aqoon ahaana aad ayey u wanaagsan yihiin”
Dhalinyaradda ayuu Abshir Muumin kula dar-daarmay inay markasta ka shaqeeyaan Hormarka Dalka.
“Waxaan Dhalinyarada kula talinaa in wax kasta iyagu hormuud u noqdaan maxaa yeelay waxaa ay leeyihiin awood badan oo aanan marna la-dafiri karin”.
In ka badan Shanbilood ayuu Dalka Dibadiisa ku maqnaa xaalad Caafimaad owgeed, waxaana ay dhallinyarada Degmada Wadajir u qabaan xiiso weyn, waxaa ay Gudoonsiiyeen Hadiyado kala duwan oo ay ugu talo galeen si-ay ugu muujiyaan in ay garabkiisa taagan yihiin.
W/Q Cali Axmed Sheekh
IMF oo soo dhaweysay Guulaha Somalia ay ka gaartay Hanaanka Maamul Maaliyadeed